How'd it happen and more reports?: စကာင်္ပူကကျောင်းသူလေးတွေငွေကို ဘယ်လိုနည်းတွေနှင့် အလွယ်ရှာနေကျလဲ?
Credit @ Ko Nge Do you know the your medical leave issued? စကာင်္ပူကအလုပ်သမားတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်အခွင့်းရေးတွေပါ၊ နိုင်ငံခြားအလုပ်သမ...
ကောင်းကင်တွင် ဈန်ဖြင့် ကြွနေသော ရဟန်း တစ်ပါး၏ ဗီဒီယို အင်တာနက် စာမျက်နှာ များပေါ်တွင် ပျံ့နှံ့ ရောက်ရှိ
breaking-vol3-no40 from CS Web Studio on Vimeo . ဖေ့စ်ဘွတ်အကောင့် အားဖွင့် လိုက်မိချိန်တွင် နာမည်ကျော် ဒီဇိုင် နာ ဆရာမြင့်မောင်ကျော် shar...
အမိမြန်မာပြည်သူလူထူတွေအရမ်းကိုမျှော်လင့်နေတဲ့ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှမ်နှံမှုတွေက ထင်သလောက် ဘယ်နိုင်ငံခြားကမှလာပြီး စက်မှုဇုံတွေမှာလက်ရှိအထိ ထ...
We make tools Your make do! Share Files from Mac OS X to Windows PC’s Easily If you haveamixed network of Mac and Windows P...
တဖြေးဖြေးခေတ်စား living together modern life အတူနေ ချစ်နလန်ဘူးကျတာ ဗွီဒီယိုဖိုင်လေးတွေပြဿနာ
ယခုလူငယ်လောက တဖြေးဖြေးခေတ်စား living together modern life အတူနေ ချစ်နလန်ဘူးကျတာ မပြောလိုပေမဲ့ ဘူးပလူးဘူးနေချိန် မိမိ လည်ပင်းကို ကြိုးဆွဲအချ...
စကာင်္ပူကကျောင်းသူလေးတွေငွေကို ဘယ်လိုနည်းတွေနှင့် အလွယ်ရှာနေကျလဲ?
စကာင်္ပူက ကျောင်းသူလေးတွေဘယ်လိုငွေကိုလွယ်လွယ်ရှာနေကျလဲ? ကြည့်လိုက်ပါအုံး!
အသက်၁၇ နှစ်သာရှိသေးတဲ့ ပိုလီကျောင်းသူ Cassandra
လွတ်လပ်တဲ့ ပြည့်တန်ဆာ အလုပ်ကိုအွန်လိုင်းတွေမှာ သူမဖောက်သည်တွေကိုရှာ ပြီး ချိမ်းတွေ့ကျပါ ရေးထားတာကိုတွေ့ရတယ်၊
သူမကပြောတယ် ပထဦးဆုံး အွန်လိုင်း Chatroom မှာ စကားပြော
ဒီလိုနှင့် ဆိုဒ်ဘာမှာတွေ့ရင်းနှင့် ယောကျာင်္းတယောက်က $300 နှင့် အတူအိပ်ဖို့ ဈေးစကား စပြောလာတာကို သူမ မငြင်းလိုက်ပါဘူးလို့!
သူမကလဲ ငွေလိုနေတာနှင့် အတွေကြုံလဲရ ငွေလဲရ အချိန်ပိုင်းလဲဖြစ် ဈေးတည့်သွားတယ်လေ၊
ချိန်းတာ များပါတယ်လို့ပြောပါတယ် အခုတော့သူမ အွန်လိုင်းမှာဘဲကျောငြာရတာပို အဆင်ပြေ တယ်လို့ပြောတယ်၊
အခုသူမမှာအလုပ်လဲမှမရှိဘူးလေ နောက်ပြီးမနှစ်ကကျောင်းထွက်ပြီး ဒီကျွမ်းကျင်တဲ့ကြေးစား အလုပ်ဘဲဆက်လုပ်ဖြစ်တယ်လေ၊
နောက် ၂နှစ်လောက်ထိဘဲဒီကြေးစားအလုပ်ကိုလုပ်ဖြစ်မှာ သူမကိုလိုချင်တဲ့ယောကျာင်္းမျိုးနှင့်တွေ့မှ သူမပုံမှန် ဘ၀ကိုပြန်ရောက်တာကအကောင်းဆုံးဘဲလို့မရှက်မကြောက်ပြောပါတယ်!
သူမက နေလည်နေခင်းနှင့် တခါတရံကျောင်းပြီးချိန်ညနေခင်းတွေမှာ ဧည့်သည်တွေစတင်
Posted by Ko Nge at Saturday, July 14, 2012
Labels: ချစ်မှုရေးရာ, အလုပ်အကိုင်, ငွေကြေး
Intern, Automotive Aftermarket Marketing Trainee
ဂျပန်မှာ ကားအဟောင်းတွေကို ဘယ်လိုဝယ်ရမလဲ!
WHO က မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ကျန်းမားရေးနှင့်ပတ်သက်တဲ့ကွ...
SweetIM.exe is Browser Hijicker virus, trojan, spy...
တညင်းသီး နှင့် သူ၏အဆိပ်....
တစ်လ ကျပ်တစ်သိန်းနှစ်သောင်းအထက်ဝင်ငွေရှိသူတိုင်း ၀...
ပြိုင်ဆိုင်မှု စီးပွားရေး မလုပ်ချင်တဲ့ မြန်မာခရိုင်...
JACKIE EVANCHO 2011 THE Finale Americas got talent...
After School E-Young guitar solo at PLAYGIRLZ Tour...
SNSD's Sexy Dance Performances
2011 Mnet Asian Music Awards @ Red Carpet in Singa...
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ လွှတ်တော်တွင် ပ...
မော်တော်ယာဉ်နှင့်ပတ်သက်သော Model အလိုက်ဈေးနှုန်းမျ...
HD EXO K MAMA Misheard Lyrics in Myanmar!
Synmantec က မိုဘိုင်းဖုန်းလုံခြုံရေးဆော့ဝဲလ်လေး!
သဘာဝချည်ထည်နဲ့ ဆိုးဆေးထည်များ ပြည်ပနိုင်ငံများမှ ၀...
ကားဈေးကွက်အေးနေပြီး လူကြိုက်များ ကားသေးများနှင့် ...
စားသုံးသူများအတွက် ပေါ်ထွက်လာတော့မည့် စားသုံးသူအကာအ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အကြောင်းကို သင်ကြားရန် ထိုင်းပည...
ကမ္ဘာပေါ်ရှိ နေထိုင်စားသောက်ကုန်ကျစရိတ် အမြင့်ဆုံးြ...
ဂျပန် ကားဟောင်းဈေးကွက် လိမ်ညာမှုများရှိနေဟု ဂျပန်လ...
လစာကောင်းတဲ့ Financial PLanner or Advisor ဆိုတာဘာလ...
ဧရာမ ဘဏ်ကြီး၏ ဧရာမ လိမ်လည်မှု
မြန်မာနိုင်ငံ မိုးနှောင်း၊ မိုးလွန်လများ ဖြစ်သည့် ...
Wyine Su Khine Thein - Sunset Love!
စကာင်္ပူကကျောင်းသူလေးတွေငွေကို ဘယ်လိုနည်းတွေနှင့် အလ...
စကာင်္ပူသို့ EP,SP ကိုင်သူတွေရဲ့မှီခိုသူခေါ်ယူခွင့်ဥပ...
မြန်မာ့စီးပွားရေး ဦးမော့လာဖို့ သူတို့အမြင်
သောက်စရာ အချိုရည်လား၊ ကြောက်စရာ အချိုရည်လား!
သားအိမ် ခေါင်း ကင်ဆာ မဖြစ်အောင် ကာကွယ် နိုင်မည့် န...
Body paint tiger on three girls
Cute and Rare Childhood pictures of Korean Stars r...
Work Living Studying in Singapore!
အွန်လိုင်း ကွန်ပျူတာဒီပလိုမာ Diploma in Science D....
ကမ္ဘာ တစ်ဝန်းမှ ဆေးပညာ တွေ့ရှိချက် အသစ်များ
မြန်မာ့ သရက်သီး တန်ဖိုးမြှင့် တင်ပို့နိုင်ရေး
မြန်မာ့သင်္ဘောကျင်း၊ သင်္ဘောလိုင်း၊ ကွန်တိန်နာဆိပ်ကမ်း...
Harvard University MBA Scholarship by Boustany Foundation
Zar Phyu Khine postedablog post